ललिता निवास प्रकरणमा किर्ते मुद्दा बिथोल्ने सेटिङमा कोको ? | वर्णन मिडिया - सूचना तथा समाचारको संवाहक |
ललिता निवासको सरकारी जग्गा किर्ते गरी व्यक्तिको हातमा पुर्याउनेहरु कोको होलान् ? कति होलान् ? जति नै ठूलो घोटाला भए पनि त्यसमा कति जनासम्म संलग्न होलान् ?
काठमाडौँ । ललिता निवासको सरकारी जग्गा किर्ते गरी व्यक्तिको हातमा पुर्याउनेहरु कोको होलान् ? कति होलान् ? जति नै ठूलो घोटाला भए पनि त्यसमा कति जनासम्म संलग्न होलान् ? अपराधको जालो कहाँदेखि कहाँसम्म होला ? जोडिए जति सबै अपराधी होलान् कि निरपराध र पीडितहरु पनि छन् होला ?
यी प्रश्न अहिले आमनागरिकको मनमा मात्र होइन, अपराध अनुसन्धानमा आफ्नो सम्पूर्ण ऊर्जा खपत गरेका र न्यायालयमै कपाल फुलाएकाहरुको ठूलो तप्काले पनि गरिरहेको छ ।
नेपालमा अपराध अनुसन्धानमा सबैभन्दा काबिल संस्था ठानिएको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले ललिता निवासको जग्गा घोटालाका क्रममा किर्ते गर्नेहरुको सूचीका रुपमा सरकारी वकिलकहाँ ३ सय ६० जनाको नामावली बुझाएपछि नेपालका मात्र होइन, संसारकै अपराध अनुसन्धान विज्ञहरुको ध्यान तानेको छ ।
एउटा किर्तेसम्बन्धी अपराध गर्न कति जनासम्म संलग्न हुन सक्छन् ? ललिता निवासको जग्गा घोटालामा संलग्नताको आरोपमा १ सय ७५ जनाविरुद्ध त भ्रष्टाचार मुद्दा नै चलिसकेको छ । अब तिनीहरुका विरुद्धमा उही अपराधमा अर्को मुद्दा चल्छ कि चल्दैन भन्ने एउटा प्रश्न छ । त्यसमाथि जग्गा विभिन्न चरणमा किनबेच भइसकेपछि सरकारी लालपूर्जाका आधारमा बकाइदा सरकारी राजस्व समेत तिनेर आफ्नो जीवनभरको मेहनतको पैसामा एउटा घडेरी किन्नेलाई पनि खुंखार अपराधीको सूचीमा नाम राखेर प्रहरीले बहादुरी देखाएको छ । जबकि, सीआईबीले ती सबैलाई बोलाएर एक शब्द सोध्ने आँट र तत्परता समेत देखाएको छैन ।
आँखैअगाडि हिँडिरहेका, सरकारी तलबभत्ता खाइरहेका, सरकारी गाडी चढिरहेका, सरकारी अगुवापछुवा लगाइरहेकाहरुलाई समेत फरारको सूचीमा राखेर अपराधी खोज्ने जिम्मासमेत अदालतलाई लगाइदिने कस्तो सीआईबी ? अनि उनी सीआईबीको कामलाई अद्वितीय देख्ने हाम्रो कस्तो मिडिया ? कस्ता सुशासनविद् ? कस्ता वकिल, न्यायाधीश र अभियानकर्मी ?
नेपालमा एउटा सूत्र बजारमा खूब बिक्छ । बाहिर खूब क्रान्तिकारी कुरा गरेपछि भित्रभित्रै जे गरे पनि हुन्छ । सबै कुराले वैधता पाउँछन् । सात खुन माफ हुन्छ । यस्तै कुनै पनि मुद्दालाई कमजोर बनाउनु छ भने बिगो रकम ठूलो र अपराधी धेरै किटान गरिदिए पुग्छ । खुंखार अपराधीलाई सुनपानी छर्किनु छ भने त्यसमा केही असल र सदाचारी मान्छेहरुलाई पनि मिसाइदिनुपर्छ । बस्, ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा सीआईबीले यही गरेको छ ।
मीनबहादुर गुरुङजस्ता विशुद्ध व्यवसायी, जसले सरकारी निकायले जारी गरेका कागजात र तिरो तिरेका रसिदमा विश्वास गरेर व्यावसायिक तवरमै जग्गा किने । आफ्नो व्यवसाय बिस्तारका लागि सम्भावना खोजे । अनि उनकै लगानी जोखिममा पर्नुपर्ने, उनैले मुद्दा धाउनुपर्ने । यो कस्तो न्याय प्रणाली हो ? यो कस्तो अनुसन्धान हो ?
किर्ते मुद्दा हो भने त जसले सरकारी छाप र अरु लिखतहरु नक्कली बनाएको छ, उसका विरुद्ध लाग्नुपर्ने हो । के एउटा लिखत बनाउन ३ सय ६० जना संलग्न हुन सक्छन् ? यो कतै सुहाउने र सम्भव कुरा हो ? कारोबारमा जोडिएका सबै अपराधी हुन्छन् ? जसले विवरण ढाँटे, ती अपराधी होलान् । जसले सरकारी जग्गालाई आफ्नो भनेर लिए र अरुलाई बेचे, ती दोषी होलान् । कयौँ चरणमा कारोबार भइसकेको र सरकारले राजस्वसमेत लिइसकेको जग्गा किन्दा पनि भ्रष्टाचारी र अपराधी ठहर भइन्छ भने अब यो सरकारले जारी गरेका अरु लिखतहरुलाई पत्याउने कि नपत्याउने ? सरकारी लिखतलाई आधार मानी व्यवसायीले व्यवसाय बिस्तार, रोजगारी सिर्जना र सरकारलाई कर तिर्ने काम गर्ने कि नगर्ने ? कुन मनोबलका आधारमा गर्ने ? यी तमाम प्रश्न उठेका छन् ।
ललिता निवास प्रकरणमा सीआईबीले कमजोर र फितलो अनुसन्धान गरी जथाभावी मान्छेहरुका नाम पोलेर फाइल सरकारी वकिललाई बुझायो । जिल्ला सरकारी वकिलले फाइल अध्ययन गरिरहँदा कतैबाट भेउ नपाएपछि महान्यान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले उक्त फाइल झिकाए । उनले त्यो फाइल नपढ्दै भेउ पाइसकेका थिए, प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारबाट । अनि उनले निर्देशन दिए, फाइल फिर्ता गरिदिनू । मुद्दाको हदम्याद सकिनै लागेका दिन सरकारी वकिलले सीआईबीमै फाइल फिर्ता गरिदिए ।
झट्ट हेर्दा सीआईबीले ठूलै अनुसन्धान गरी व्यापक मेहनतका साथ फाइल तयार गरेको देखिन्छ । झण्डै एक ट्रक कागजात लिएर सरकारी वकिल कार्यालय पुग्दा सीआईबीका निर्देशक धीरजप्रताप सिंहलाई ठाउँका ठाउँ तक्मा दिनुपर्ने देखिन्छ । तर, यथार्थ बेग्लै छ । सिंहले बाहिर आफू हिरो बन्ने र भित्रभित्रै अवकाशको नजिक पुगेका बेला आफ्नो पद तथा अरु केही भित्री बार्गेनिङका लागि यो सब गरेको बुझिन्छ । त्यसमा बालुवाटारदेखि महान्यायाधिवक्तासम्मको मिलेमतो देखिन्छ ।
जसरी बालुवाटारको जग्गा हडप्न केही व्यक्तिले सरकारी छाप दुरुपयोग गरे, त्यसैगरी अहिले सीआईबी, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र बालुवाटारको बसाइँलाई पनि दुरुपयोग गरी केही व्यक्तिले गोरखधन्दा चलाइरहेका छन् । यो कुरा ललितानिवास प्रकरणले पनि छर्लंग पारेको छ । त्यस्ता प्रकरणमा एक निष्पक्ष आयोग बनाएर छानबिन नगरेसम्म मुलुकमा सुशासन र न्यायको प्रत्याभूति हुने देखिँदैन । सरकारी पद र पोशाक लगाएर गरिने गुण्डागर्दी दाउद इब्राहिमले गर्ने भूमिगत अपराधभन्दा खतरनाक छ ।